MOTAŞ na-arụ Ọrụ Dị ukwuu Ọrụ
N'ịga n'ihu na mbọ ya iji bulie afọ ojuju ndị ahịa, MOTAŞ na-eburu ụgbọ ala ya kwa ụbọchị iji buru ndị njem ọcha. Obodo MlatA Malatya [More ...]
Oge mbu uzo anyi jiri ‘Tosun’
Istanbul bidoro ịnabata nnabata ọpụpụ na 1960s. Nke a mere, ahịrị dị mkpirisi bidoro gbasa obodo niile. Ahịrị nke mbụ maka larịị Trolleybus, nke ebido izizi na Istanbul na 1961 [More ...]
Malatya Obodo ukwu MOTA M malitere mmerụ ahụ n'ụgbọ njem ọha na eze iji gbochie mgbasa nke ọrịa nke nje. Na-arụ ọrụ iji bulie afọ ojuju ndị ahịa, MOTAŞ bụ akụkụ okuku ume na elu. [More ...]
100 Roman ụgbọala Trolleybus Tender Bozankaya'S
Turkey mbụ okporo ígwè ụgbọala ekspootu BozankayaThelọ ikpe ahụ mere mkpebi ikpeazụ ya banyere trolleybus soft nke 100 meriri na Bucharest. Turkey mbụ okporo ígwè ụgbọala ekspootu Bozankayaụzọ mkpa abụọ dị mkpa n’afọ gara aga [More ...]
Dị ka amaara, akụkọ banyere agwọ ahụ bụ okwu eji eme ihe na isiokwu ndị a na-enweghị ike ikwubi wee gaa n'ihu. Igbu oge nke oru, kwusi ma abia n’uche ma buru nkwa n’okwu banyere odida. Ndị nke Şanlıurfa [More ...]
Latgbọ njem ndị isi obodo nke Malatya Metropolitan Municipal (MOTAS) ga-enye ụmụ amaala ọrụ njem ụgbọelu n’oge Eid al-Adha. 11 - 14 a ga-eme ụmụ amaala Eid al-Adha n’agbata Ọgọst na 2019. [More ...]
15 - 16 Ndị aga-aga ga-abanye YKS na June ga-erite uru site na njem ọha na eze nke Obodo ukwu na-akwụghị ụgwọ site na igosi akwụkwọ ntinye akwụkwọ nyocha. Obodo Malatya mepere emepe, Educationlọ-akwụkwọ kachasị elu a ga-eme na ngwụcha izu a [More ...]
Esgbọ ala na trambuse nke MOTAŞ nke Malatya Metropolitan Ọchịchị ga-eweta ọrụ n'efu na mpaghara niile na Malatya, ọkachasị na ụbọchị mbụ nke Ramadan. A ga-eme ememe 4-6 June 2019 n'etiti [More ...]
Sanliurfa Mayor Nihat Ciftci, n'oge Nzukọ Mgbakọ ikpeazụ nke Trambus oru n'ihi mmụba nke ọnụego mgbanwe n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ enweghị ike ịrụzu oge, ma kwuru na tarmbuses ga-enyefe na May. [More ...]
Vehiclegbọ njem trolley-nke Ugwu China nke mbụ bidoro njem nlele ya na Harbin, nke nwere teknụzụ ọkwọ ụgbọ ala na-enweghị akwọ. The Trolley bụ 30 mita n'ogologo ma nwee ike ịgba kilogram 70 kwa elekere. Typesdị ochie [More ...]
Oge agbakwunye 70 kwa ọnwa maka oru trambus, nke a maara na ọ na-efu nde 35 nde ma na-emefu na nde 2 nde maka akụrụngwa, mkpanaka, nkwụsị, wires ike. [More ...]
Malatya Metropolitan Mayor Hacı Uğur Polat gara ilekọta Mazi Nlekọta na Ndozigharị Trambus ma nata ozi site n'aka MOTAŞ General Manager Enver Sedat Tamgacı. N'elu ya na igwefoto 158 n'ubi [More ...]
Na-arụ ọrụ iji mee ka afọ ojuju ndị ahịa dị elu, MOTAŞ na-aga n'ihu na-eme nhicha zuru oke yana nhichakwa ụgbọala kwa ụbọchị iji bufee ndị njem nọ na gburugburu ọcha na ịdị ọcha karị. onye ọ bụla [More ...]
Ndi Obodo ukwu nke Şanlıurfa bidoro oru Trambus na Sanliurfa. Onye isi na Secretaryanlıurfa Metropolitan Municipality Secretary General M. Can Hallaç gara Şanlıurfa pollọ Ọrụ Obodo Metro AS, ụlọ ọrụ na-ebubata ọrụ na Trambus. Obodo Ukwuu [More ...]
Minister nke Mmeputa na Teknụzụ Mustafa Varank, Bozankaya AŞ nke Sileo (Silent) S10 ụgbọ ala ọkọlọtọ dị n'azụ wiil ahụ. Anọdụ ala n'oche oche nke ụgbọ ala gburugburu ebe obibi, nke na-adọta uche ya ịbụ ma ụlọ ma ọkụ eletrik [More ...]
Trambus, onye sonyere na usoro ụgbọ njem ọha na eze na Şanlıurfa iji mee ka ụgbọ njem site na Metropolitan, ghara ịbanye ọzọ. A ga-eme 21 na November. Oge ụfọdụ gara aga site na Mayor nke Şanlıurfa Nihat Çiftçi [More ...]
Şanlıurfa ngwa na ubi nke ọha iga na nlereanya ndụ Akpọlite ​​Metropolitan Municipality, na ọnụ ọgụgụ nke ikpeazụ 4 314 na 49 iche iche metụtara a ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala ụzọ gasị na ọrụ a afọ nke Turkey kasị ukwuu iga netwọk [More ...]
A na-emecha draịva ule Trambus na Şanlıurfa nke ọma. Trambus ahụ, nke ga-eje ozi n'ahịrị 63 n'etiti Abide na Balıklıgöl, emechaala njem njem ya n'enweghị nsogbu na draịvụ ule wee nata akara zuru oke. Obodo ukwu nke Şanlerurfa [More ...]
Onye isi obodo Şanlıurfa Nihat Çiftçi mepere ụlọ ọrụ ebe Onye Isi Ọchịchị nke Obodo BELSAN rụchara. Complexgbọ njem ndị gọọmentị Sanliurfa guzobere, ụlọ ọrụ mpịakọta narị puku 3, [More ...]
Nkwụsị ndị a na-eme na mpaghara nke Trolleybus Project, nke Şanlıurfa Metropolitan Obodo mebere, adabaghị maka ndị nwere nkwarụ na ndị nne na nna na-eji strollers. Ọchịchị ime obodo iji gbochie mkpesa a tupu ọrụ amalite [More ...]